3 Antony tsy dia akaiky ny dikantenin'olombelona ny fandikana ny masinina | Martech Zone
Talata, Jolay 21, 2015 Alatsinainy, Jolay 20, 2015 Douglas Karr
Taona maro lasa izay, tadidiko ireo tranonkala rehetra izay nampiditra ireo bokotra fandikan-teny mandeha ho azy mahatsiravina ireo. Tsindrio eo amin'ny tranokala tsy anglisy ny bokotra ary zara raha novakiana. Ny fitsapana tsara indrindra dia ny fandikana andininy iray amin'ny teny anglisy amin'ny fiteny hafa… ary avy eo miverina amin'ny teny anglisy mba hahitana ny maha samy hafa ny valiny.
Raha jerena, raha mandika ny andalana voalohany amin'ny teny Anglisy ka hatramin'ny Espaniôla aho ary miverina mampiasa indray Dikanteny Google, izao no vokany:
Taona maro lasa izay, tadidiko ireo tranonkala bokotra rehetra ireo, anisan'izany ny fandikana milina mahatsiravina. Tsindrio ny bokotra eo amin'ny tranonkala iray hafa noho ny anglisy ary zara raha voavaky. Ny porofo tsara indrindra dia ny fandikana ny andininy iray amin'ny teny anglisy amin'ny fiteny hafa… ary avy eo miverina amin'ny teny anglisy mba hahitana ny maha samy hafa ny vokany.
Amin'ny dingana tsotra iray, dia azonao atao ny mahita ny ampahan'ny marina sy ny verbiage milamina very. Ny fetran'ny fandikan-teny amin'ny milina dia mitovy amin'ny efa an-taonany maro. Tsy misy ny fandikana milina teny manodidina, ny fahaizana mandresy MANJAVOZAVO, ary ny tsy fisian'ny traikefa. The milina tsy nahita fianarana 20+ taona tamina sehatra na lohahevitra manokana nivoatra rehefa nandeha ny fotoana. Tsy adika fotsiny ny teny, fa adika mifototra amin'ny lohahevitra sy ny zavatra niainan'ny mpanoratra sy mpamaky.
Mazava ho azy fa tsy ho tafiditra ao am-paosinao ny mpandika tenin'olombelona, ​​ary mety tsy ho afaka hiaraka aminao amin'ilay trano fisakafoanana Thai tena izy na fialan-tsasatra any ivelany izy ireo, ka izao no soso-kevitray: Rehefa mila valiny eo noho eo ianao dia manome izy ireo ' Tsy tokony ho lavorary isika, tsy maninona ny mampiasa Google Translate. Ho an'ny raharaham-barotra na antontan-taratasy ara-barotra, na zavatra tsy maintsy ho marimarina, tsara kokoa ny mifikitra amin'ireo mpandika tenin'olombelona.
Ity misy fitsapana mivantana avy any Verbalink izay manome fikarohana sy fomba fanao tsara indrindra an'ny Fandikana milina mifanohitra amin'ny fandikan-tenin'olombelona.
Tags: google translatefandikan-teny Googlefandikan-tenin'olombelonafandikan-teny amin'ny milinaverbalink
Mar 7, 2016 amin'ny 8: 14 AM
Mahaliana sy mahatsikaiky!!!! Ataoko fa tsy haharesy olona mihitsy ny milina!!